RASMI: Barcelona oo heshiis qaali ah lagaartay Shirkada Rakuten – Gool FM
Liibaan Fantastic November 16, 2016
(Barcelona) 16 Nov 2016 Kooxda Barcelona ayaa heshiis qaali ah la saxiixatay dhigeeda Rakuten oo ah shirkad laga leeyahay dalka Japan.
Qandaraaska Barcelona ay kula jirtay shirkada duulimaadka diyaaradaha dalka Qatar ee Qatar Airways ayaa ku eg dhamaadka xiliciyaareed kan, waxayna shaaciyeen in 5-ta sano ee so socota ay kooxdu xayaysiin doonto shirkada Rakuten.
Heshiiska ayaa ku eg ilaa June 2021, Barcelona ayaana sanadkii qaadan doonta aduun dhan 55.5 milyan oo euro oo lagu daray 1.5 milyan oo euro haddii ay ku guulaysto La Liga oo lagu sii daray 5 milyan haddii ay ku guulaysto Champions League.
Madaxwaynaha shirkada Rakuten oo ka hadlay heshiiska ay lagaareen Barcelona ayaa yiri:
“Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan shaacino in heshiis aan la gaarnay kooxda ugu fiican aduunka ee Barcelona”.
Waxaa ka mid ah heshiiska Barcelona ay lagashay shirkada Rakuten in kooxdu ay kulan saaxiibtinimo ku soo ciyaarto dalka Japan, iyaga oo markale kulan kale ku soo ciyaari kara Japan haddii ay u suurogasho.
Arturo Vidal oo shaki galiyay taam ahaanshihiisa kadib guushii Uruguay